Mpahay toekarena nampanantsoin’ny biraon’ny mpampanoa lalàna Mozambikana taorian’ny nanoratany taratasy misokatra ho an’ny filoha · Global Voices teny Malagasy
Mpahay toekarena nampanantsoin'ny biraon'ny mpampanoa lalàna Mozambikana taorian'ny nanoratany taratasy misokatra ho an'ny filoha
Nandika (fr) i Alexandre Dias Da Silva
Voadika ny 08 Desambra 2019 4:18 GMT
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana May 2014)
Nuno Castel-Branco. Saripikan'ny Ivontoeram-pampianarana Sosialy sy Toekarena (IESE), izay naha tale an'i Castel-Branco.
Tamin'ny volana Novambra 2013, voampanga ho nanevateva ny filoham-pirenena Mozambikana ilay mpahay toekarena sady mpampianatra ao amin'ny oniversite Nuno Castel-Branco taorian'ny namoahany ny taratasy misokatra izay nanambarany ny heviny momba ny governemantan'ny Filoha Armando Guebuza. Nampanantsoin'ny biraon'ny filohan'ny fampanoavana an'ny Repoblika (PGR) ao Mozambika izy ny 26 May 2014. Nampiantso azy voalohany ny biraon'ny fampanoavana tamin'ny volana Desambra 2013 kanefa tsy nipoitra ity farany noho ny filazany fa tsy nisy ny fampandrenesana (araka ny notaterin'ny Global Voices niaraka tamin'ny antsipiriany bebe kokoa momba ny raharaha).
Tao anatin'ity taratasy ity, nanakiana mafy an'i Armando Guebuza i Castel-Branco ary nanolo-kevitra azy mihitsy aza izy hametra-pialana noho ny fihetsiny tsy voafehy sy ny politikany manohy ny fahantrana izay manosika an'i Mozambika ho any amoron-kady.
Tao amin'ny pejy Facebook-n'ny gazety Canal Moz, nanoratra fanamarihana i Lissay Zucula, ho fanehoan-kevitra tamin'ny lahatsoratra iray momba ny tranga, izay nanolorany hevitra fa tokony hisahana bebe kokoany raharahan'ny heloka bevava aloha ny biraon'ny mpampanoa lalàna fa tsy tokony hanitsakitsaka ny fahalalahana. maneho hevitra.
Saribakolin'ny governemanta (an'ny Filohan'ny Repoblika) ny PGR. Fampitahorana izany rehetra izany . Tokony hisambotra ny Mozambikana rehetra izy ireo raha manao izany satria eo ankilan'i Dr. Castelo-Branco ny vahoaka. Nilaza tamim-peo mafy izay noeritreretiny izy ary sahy fotsiny nanao toy izany tamin'ity indray mitoraka ity tamin'ny firesahana tamin'ilay olona tompon'andraikitry ny fahorian'ny firenena (dadatoa Picsou). Tokony hirona bebe kokoa amin'ny raharaha “henjana” kokoa izay mametraka ny fanjakana ho eo ambany fahefan'ny fikambanan-jiolahy ny biraon'ny fampanoavana ary tsy tokony hanakana ny olona mahasahy maneho hevitra milaza sy manoratra izay tsapan'ny vahoaka fa tsy manam-pahafahana hanehoana izany. Tsy fananana ary tsy ho fananan'izay mipetraka na hipetraka ho filohan'ny Repoblika i Mozambika. An'ny Mozambikana rehetra ity firenena ity, averiko ihany, an'ny Mozambikana rehetra…
Ankoatra izay, marihina fa ny volana Desambra 2013, nomena tsiny noho ny fampiasana tafahoatra ny fahalalahana an-gazety taorian'ny samy namoahan'izy roa ireo ilay taratasy ny gazety Canal de Moçambique sy MediaFax.
Rehefa nifarana ny fanadihadiana natao azy tao amin'ny fampanoavana dia nilaza i Nuno Castel-Branco fa tsy nanenenany ny tolona nataony: tamin'ny nanoratana ny lahatsoratra izay navoakany tao amin'ny Facebook, nikasa ny hanentana adihevitra mikasika ilay lohahevitra izay nofaritany ho matotra ho an'ny firenena izy. “Mitohy ny tolona,” hoy izy namarana, araka ny henontsika amin'ity lahatsary etsy ambany ity:
Nivezivezy tao amin'ny Aterineto nanomboka ny faran'ny taona 2013 ny fanangonan-tsonia ho fiarovana ny fahalalahana maneho hevitra ary nanome fanohanana manokana an'ilay mpahay toekarena Nuno Castel-Branco .